Hatomboka amin’ny 16 septambra 2019 ny famakiana tsikelikely ilay vatobe izay mandondona eny Ambohibary, Fokontany Tsarahasina, Kaominina Ambohimangakely, Distrika Antananarivo Avaradrano. Taorian’ny fivoriana nataon’ny teknisianin’ny BNGRC, niarahana tamin’ny Distrika Antananarivo Avaradrano, sy taorian’ny fidinana ifotony natao ny 30 aogositra 2019, no nanapahana ny hevitra fa hovakiana tsikelikely ilay vatobe. Vinavinaina ho vita ao anatin’ny efa-bolana ny asa. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Abdallah Rosalie Tvhfb
Nahatsiaro voafitaka ireto Malagasy 27 lahy ireto, raha nentina avy aty Madagasikara mba hiasa any Comores. Nisy fifanarahana tsy tanteraka teo amin’ireo mpiasa sy ny mpampiasa azy ireo. Nisy ny fifanantonana teo amin’ny mpitondra malagasy, tamin’ny alalan’ny ministeran’ny raharaham-bahiny sy ry zareo Kaomoriana, nahafahana nampody ireto Malagasy ireto. Nandeha sambo niverina tao Mahajanga izy ireo, tonga ny talata teo. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 12 septembre 2019 16:52
Fanandevozana vaovao: Na ny sarandalana hodiana aza saika tsy azon’ireto mpiasa
Mpiasa maromaro avy any Faratsiho, Antsirabe, Mandoto, Fianarantsoa … no nentin’ny orinasa iray nankany Antsiranana, hanao asa lalana. Telo volana niasana izy ireo, mitaraina ho tsy nandray karama. Andraso lava no valintenin’ny mpampiasa rehefa mitaky ny valin-kasasarany ireo mpiasa. Nanambana ny hitokona ireo mpiasa, ary saika handoro ireo fitaovana, toy ny fiaran’ny orinasa, vao nisy vola kely azo. Tapa-kevitra ireo mpiasa fa hiala satria nanomboka nahatsapa fanararaotana izy ireo. Teo no tena olana ho azy ireo, satria na sarandalana hodiana aza saika tsy azo. Nanao dia an-tongotra nandritra ny 13 ora ireo mpiasa, niala tany amin’ny toerana niasana (chantier) vao tonga tao Antsiranana renivohitra, handray fiara taksiborosy niazo an’Antananarivo. Tonga ny alin’ny talata ny ampahany voalohany ; 28 lahy izy ireo, ny sasany mbola tany aorina, nisy nandraiky narary. Izay hahatongavana eo anivon’ny fianakaviana, tsy maty fo aman’aina no zava-dehibe aminay, hoy izy ireo.
Sary: Lovasoa Joella‎
Androany alarobia 11 septambra 2019 i Roland Ratsiraka no nametraka ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiany ho Ben’ny tanàna eto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina. Izy no kandida faharoa tonga teo anivon’ny OVEC Toamasina nametraka ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiany, taorian’ny kandida tsy miankina Yvan Fabius. Namorona ny fikambanana Toamasina Tonga Saina (TTS) i Roland Ratsiraka tamin’ny 1998, avy eo voafidy Solombavambahoakan’i Toamasina. Efa Ben’ny tanànan’i Toamasina i Roland Ratsiraka tamin’ny 1999. Naato tamin’ny asany ny taona 2002. Voafidy ho Ben’ny tanàna indray ny taona 2003.
mardi, 10 septembre 2019 16:01
Tafika Malagasy: Manamboninahitra iray iharan’ny « affectation disciplinaire » sy « sanction administrative »
Nitondra fitaovam-panjakana tamin'ny filàny manokana no nandraisan’ny teo anivon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena fepetra avy hatrany an’ity miaramila manamboninahitra ity, ka nafindra toeram-piasana any Atsimo, ary arahina fepetra famaizana (affectation disciplinaire ainsi qu'une sanction administrative). Noraisina izao fepetra izao, hoy hatrany ny avy eo anivon’ny Tafika Malagasy, mba tsy hisian'ny fihoaram-pefy amin'ny endriny maro samihafa, izay mety ataon'ny miaramila mandritra ny fanatanterahany ny asany, ary ihany koa ahalalan'ny Vahoaka fa manaja ny lalàna ny Tafika Malagasy. Miteraka adihevitra hatrany moa itony karazana sazy famindran-toerana, na affectation disciplinaire itony, satria izay fakon'olona manao adalana rehetra ve dia alefa any amin'ny faritra efa sahirana sy saro-dalana. Anga toera-mpamonjana, na toeran'olom-boasazy ireny toerana ireny? Tsy ny famaizana sy ny fanonerana ny nalainy tsy ara-drariny ve no mila jerena, eny na miafara amin'ny fandroahana mihitsy aza.
lundi, 09 septembre 2019 13:14
Sary Gasypatriote sy sary nindramina
Fitsidihan’i Papa Fransoa: Hentitra ny fitandroana ny filaminana
Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitandroana ny filaminana nialoha sy nandritra ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Fransoa teto Madagasikara ny 6 ka hatramin’ny 8 septambra 2019. Hentitra ny fitandroana ny filaminana, nihoatra ny tokony ho izy aza, hoy ny sasany. Re ihany fa nisy nikasa hanakorontana saingy, na tsy sahy, na tsy nahavanona. Teny Ivato, ny alina nialohan'ny fahatongavan'i Papa Ray Masina dia nisy nanaparitaka fako teny amin’ny arabe. Nandray andraikitra avy hatrany ny Ben’ny tanàna dia voadio ara-potoana izany. Naharenesana feo ihany koa teny Sabotsy Namehana fa hisy andian-jatovo hanakorontana ny alim-bavaka teny Soamandrakizay niarahan’ny Tanora tamin’i Papa Fransoa ny sabotsy 7 septambra 2019. Nandray fepetra hentitra (Dispositif de dissuasion) ny mpitandro ny filaminana dia voasoroka izany.
lundi, 09 septembre 2019 00:03
Mahatazana: Nivavaka ho an’ny mpiasa rehetra i Papa Fransoa
Teny amin’ny toeram-pamakiana vato Mahatazana, miaraka amin’ny Akamasoa, izay sahanin’ny Mompera Pedro Opeka, ao amin’ny Kaominina Ambohimangakely i Pape Fransoa ny tolakandro teo. Mpiasa roa mianadahy mianaka no nitsena azy tamin-kira tamin’ny anaran’ireo mpiasa 700 mahery, miasa isan’andro eny an-toerana. Rasoananahary Hanitra Nirina Madeleine, vevivavy 29 taona, no nitondra tenin'ireo mpiasa eny Mahatazana, nisaotra an’i Papa nitsidika mivantana azy ireo sy miady ho an’ny zon’ny mpiasa manerantany. Maniry ny hanjakan’ny rariny sy hitsinjovana ny mahantra.
dimanche, 08 septembre 2019 23:30
Fitsidihan’i Papa Fransoa: Mpiasan’ny fahasalamana sy mpirotsaka an-tsitrapo 700 mahery no nahetsika
Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Fransoa teto Madagasikara. Teo amin’ny fiahiana ara-pasalamana ireo mpizaika avy amin’ny lafy valon’ny Nosy dia mpitsabo sy mpirotsaka an-tsitrapo 700 mahery no nahetsiky ny ministeran’ny fahasalam-bahoaka. Ankoatra ny teny Soamandrakizay dia nisy hatrany ireo niandry raharaha tamin’ireo hopitaly teo an-drenivohitra sy ireo tobim-pahasalamana teny manodidina toa ny CSB2 Alarobia, Ambohimanarina … (Jereo Tohiny Sary Lamesa Soamandrakizay)
Nitsidika ny « Office de Transmission Militaire de l’Etat » (OTME) eny Andafiavaratra ny Praiminisitra Ntsay Christian androany maraina, anamafisana ny fijerena sy fandrindrana ny asa mikasika ny filaminana sy ny fandriampahalemana mandritra ny fitsidihana Apostolika ataon’i Papa Ray Masina Fransoa , filoham-panjakan’i Vatikana. Manampy an’ireo ivon-toerana efa miasa amin’ny fanaraha-maso ny filaminana eto Antananarivo eo anivon’ny Foloalindahy, amin’ny alalan’ny fahitalavitra, ny OTME.
Tranga nanaitra ny maro no sady nampalahelo ny nahazo an'i Mosesy, 96 taona, raha nitambotsotra tampoka teo amin'ny lalantsaran’ny Fitsarana Antalaha, teo ampiandrasana ny minitra hijoroany eo anetrahan'ny fitsarana ny 02 septambra 2019. Raharaha fananantany no nitorian'ny mpanambola azy tao Andratamarina, Distrikan’i Sambava. Tsy misy tsy mahafantatra fa an’i Mosesy ny tany tao Andranohely, ary misoratra amin'ny anarany. Ny Alakamisy lasa teo dia nisy Zandary tonga teny an-toerana ka nampiantso azy sy ny zanany ary zafiny mba ho tonga ao amin'ny biraon'ny Kaominina Andratamarina ny marainan’ny zoma 30 aogositra 2019 mba hanaovana fanadihadiana. Naharitra adiny telo izany .